Duqa Skien oo raaligalin ka bixisay hadal ay soomaalida ka sheegtay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Duqa Skien oo raaligalin ka bixisay hadal ay soomaalida ka sheegtay.
Duqa magaalada Skien Hedda Foss Foto: NHD
Duqa magaalada Skien ee gobolka Telemark ee dalkan Norway, Hedda Foss Five ayaa shaley xili ay shir jaraa´id qabaneysay sheegtay in xanuunka Corona Virus oo ku dhex faafay bulshooyinka ajaaniibta ah, gaar ahaan soomaalida uu kusii fiday iskuulada magaalada iyo goobaha shaqada. Halkan kasii akhri.
Arrintan ayaa abuurtay dood adag iyo carro xoogan oo ay muujiyeen qaar kamid ah bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Skien, kuwaas oo ka hadlay warbaahinta. Waxeyna sheegeen inay dareemayaan in duqa magaaladdu ay xanuunka oo bulshada dhan wada saameeyay, ay si gaar ah ugu riixeyso soomaalida. Iyaga oo sheegay in arrintaas ay u arkaan takoor iyo faquuqis soomaalida lagu sameynayo.
Duqa magaalada: Raali-galin ayaan bixin, ujeedkeenu sidaas ma aheyn.
Kadib markii ay warbaahinta ka hadleen dad soomaali ah oo dhaleeceyn u jeediyay duqa magaalada, Hedda Foss ayaa wargeysyada lokalka ah ka sheegtay inay raali-galin ka bixineyso hadalkii ay shaley sheegtay, hadii si qaldan loo fahmay. Waxeyna raacisay in ujeedada ay arrintaas u sheegeysay aysan aheyn inay cid gaar ah u danlaheyd, balse ay ka hadleysay xaaladda guud ee xanuunka Corona iyo sida uu ugu faafay bulshooyinka kala duwan ee magaalada kunool.
Duqa magaalada Skien ayaa mar kale ku celisay in faafitaanka xanuunka uu aad ugu badanyahay bulshooyinka ajaaniibta ah, marka loo fiiriyo tirada bulshada guud ee degmada kunool. Sidaas darteed ay la shaqeeyaan gudiyaal kala duwan oo bulshada ka wacyigaliya kahortaga faafitaanka xanuunka.
Waxeyna sheegtay in dad soomaali ah oo jaaliyadda soomaaliyeed matala ay kujiraan gudigaas loo sameeyay inay maamulka degmada talo-bixin ka siiyaan habkii looga hortagi lahaa faafitaanka xanuunka ee bulshooyinka ajaaniibta ah. Si gaar ah waxey u xustay inay kulamo la yeesheen dad ka socdo masaajidka soomaalida ee Skien.
Duqa magaalada ayaa sidoo kale raacisay inay aad uga xumaatay, kadib markii ay aragtay falcelinta xoogan ee laga muujiyay hadalkeedii hore. Iyada oo raacisay inay kulamo la qaadan doonto bulshada soomaalida ah, muhiimadduna ay tahay sidii si wadajir ah faafitaanka xanuunka looga hortagi lahaa.
Xigashi/kilde: Hedda svarer på kritikk fra somaliere: – Jeg blir svært lei meg og overrasket.
Previous articleKeshvari oo hadana xabsi kale lagu xukumay.
Next articleNooc cusub oo Coronavirus ah oo UK lagu arkay: Cabsi xoogan oo laga qabo.